UBen 10 uhalela ukudlala e-England - Ilanga News
Home Ezemidlalo UBen 10 uhalela ukudlala e-England
UBen 10 uhalela ukudlala e-England
Ufuna ukwenza iRangers yaseScotland isitebhisi
UBONGANI Zungu weBafana Bafana. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
UMDLALI weqembu lesizwe lakuleli iBafana Bafana ufuna ukwenza ikilabhu ehlonishwayo yase-Europe isitebhisi sokuyodlala kwi-English Premiership.
UBongani “Ben 10” Zungu olihlikihla esiswini kwiBafana, unyelwe yinyoni esandleni esayina ngemizuzu yokugcina selivalwa iwindi kwiRangers yaseScotland. Ubolekiswe isizini kule kilabhu enomlando ohlonishwayo e-Europe.
UZungu uthi ufuna ukukuqinisekisa ukuthi le kilabhu iyayinqoba iligi ukuze kufezeke iphupho lakhe lokuyodlala e-England.
”Ngijabule ngendlela eyisimanga ukugcina ngiphumelele ukudlala kwiRangers.
“Sengiseduze kakhulu ne-England manje, inhloso yami wukudlala ngokuzikhandla ukuze ngifinyelele khona.
“Kuyiphupho lanoma yimuphi umdlali ukudlala kwi-English Premiership ngakho-ke kuzofanele ngidlale ngokuzikhandla kwiRangers ukuze ngihehe iso lamakilabhu akhona,” kusho uZungu.
UStephen Gerrard ololonga iRangers futhi oyindoda ehlonishwayo e-England, uthe: ”Inhloso yethu ngokulanda uZungu wukuthi besidinga umuntu ozokwazi ukudlalisa ikilabhu esiswini futhi asiwinele namabhola.
“Ngikholwa wukuthi uZungu uzokwazi ukukwenza lokho ngoba unekhono elimangalisayo. Ngizimisele ngokumsiza afeze iphupho lakhe lokuyodlala kwi-English Premiership futhi ngiyakholwa ukuthi lokho kuzokwenzeka,” kusho uGerrard.
UZungu ukhombise elihle ikhono iBafana idlala kwi-African Cup of Nations nalapho iphume khona kuma-quarter final ngonyaka odlule e-Egypt.
Previous articleAkazisoli ngokushiya umsebenzi
Next articleBangend emgwaqweni befuna “ukuqashwa”